Thich Nhat Hanh | Dr Ko Ko Gyi's Blog
ပြောရင် ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး .. ဒါပေမယ့် ပြောသင့်တယ် ထင်လို့ ပြောရမယ်
ယနေ့ နိုင်ငံတကာမှာ Dalai Lama လို Quality ကောင်းတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာက သာသာနာပျံနေတာ ကြာပေါ့။ ပြောကြမယ် .. အဲဒါ ထေရဝါဒ မဟုတ်ဘူး .. မဟာယန အယူအမှားဆိုပြီး .. ဒါပေမယ့် ယနေ့ နိုင်ငံတကာ စာအုပ်ဆိုင်တွေရဲ့ စာအုပ်စင်တွေမှာ သွားကြည့် .. ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် .. ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အကြောင်း .. Meditation တွေ အကြောင်း .. ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေဟာ .. မဟာယန ဆရာတော်တွေ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ။ ဗီယက်နမ် ဆရာတော် Thich Nhat Hanh စာအုပ်တွေ ရှိမယ် .. ထိုင်းက ဆရာတော်တွေရဲ့ စာအုပ်တွေ ရှိမယ် .. Dalai Lama စာအုပ်တွေ ရှိမယ်။ အခြား နိုင်ငံခြားသားတွေ သူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေ သူတို့ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုတွေကို ရေးထားမယ်။ အဲဒါတွေပဲ ..
Tags:969, Buddhism, Burma, Dalai Lama, Religion and Spirituality, Thich Nhat Hanh, Tibetan, Wira Thu